Poll :: Outline News Service
भारतयि सत्तारुढ दल कांग्रेस आइले नेपालमा पार्टी कार्यालय स्थापना गरेर काम थाल्नुलाई तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा नियन्त्रण राख्ने योजना (53%)नेपाल सरकारको कमजोरी (32%)पार्टीको अन्तर्राट्रियकरण गर्ने प्रयास (16%) Posted On: 2013-05-21 17:31:36
नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युको २० वर्ष वितिसक्दा पनि स्पष्ट कारण किन वाहिर नआएको होला ?
छानविन गर्नेले तदारुकता नदेखाएर (23%)छानविन गर्ने मान्छे कै संलग्नता भएकोले (63%)विदेशीको दवाव (14%) Posted On: 2013-05-17 10:40:37
चुनावको घोषणा पहिला की विवादको समाधान पहिला भन्ने विवादलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
पहिला चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ (20%)मिति घोषणा मात्रै गरेर चुनाव हुन्छ र ? (40%) दलहरुको कामै विवाद गर्ने काम गर्ने होइन.. (40%) Posted On: 2013-05-13 14:08:14
चौतर्फी विरोध र विवादका बीच कार्की अख्तियार प्रमुख बन्नुलाई के भन्नु हुन्छ ?
गणतन्त्रको खिलाप (77%)दलहरुको वाध्यता (15%)अरु विकल्प नै थिएन (8%) Posted On: 2013-05-08 17:25:19
गर्मीयामसँगै हुने आगलागीका घटना रोक्न के गर्नु पर्ला ?
आफै सचेत हुनु पर्छ (27%)जनचेतना फैलाउनु पर्छ (73%) Posted On: 2013-05-04 14:21:09
दल दर्ता सुरु भयो, निर्वाचन आयोगले के मा ध्यान दिनु पर्ला ?
हस्ताक्षर प्रमाणिकरणमा (6%)दलहरुको पारदर्शितामा (12%)निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्नमा (82%) Posted On: 2013-04-30 13:58:45
प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनु भएको छ ?
सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न (13%)आर्थिक लगानीको अपेक्षा (13%)आखिर हुने केही होइन (75%) Posted On: 2013-04-28 13:17:41
सरकारले लोकतन्त्र दिवस किन नमनाएको होला ?
जनताको आन्दोलनको तिरस्कार (38%)मनाएर मात्र के हुन्छ ? (62%) Posted On: 2013-04-24 16:14:47
मुलुकमा एमाले छैन भन्ने प्रचण्डको भनाईलाई के भन्नुहुन्छ ?
Posted On: 2013-04-24 15:25:46
सुनको मुल्यमा गिरावट आउनुलाई के भन्नु हुन्छ ?
अझै घट्नु पर्छ (59%) न हर्ष, न विस्मात (41%) Posted On: 2013-04-17 17:02:23